संयुक्त राष्ट्रले जारी गऱ्यो ‘दीपावली’ विषयक हुलाक टिकट श्रृंखला, नेपालको भने नामै छैन ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
कात्तिक २२ गते, २०७५ - ०६:३६
न्युयोर्क। संयुक्त राष्ट्र हुलाक विभागले नेपाल र भारतमा मनाइने प्रकाशको पर्व तिहारको उपलक्षमा ‘दियो’ भएको टिकट जारी गरेकोमा भारतले संयुक्त राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
सम्बन्धित् समाचार कसरी सुरु भयो देउसी–भैलो ? तिहारसँग जोडिएका केहि रोचक तथ्य
सम्बन्धित् समाचार यूएन क्षेत्रीय कार्यालय हट्ने
कात्तिक २२ गते, २०७५ - ०६:३६ मा प्रकाशित